Ahoana no fahandro Bacon ao amin'ny lafaoro - Torohevitra Sy Hevi-Dehibe!
inona no hohanina amin'ny lasopy voatavo butternut
azonao atao ve ny mangatsiaka ny salady an-trano?
tsaramaso voaendy miaraka amin'ny mananasy sy bacon
ny fomba fanaovana asparagus amin'ny fryer
Ahoana no fahandro Bacon ao amin'ny lafaoro
Bacon ao amin'ny lafaoro - tena fomba tsotra indrindra handrahoana azy! Rehefa avy nianatra nanamboatra bacon tao anaty lafaoro aho dia tsy hiverina hanendy azy intsony! Mivoaka masiaka tanteraka rehetra fotoana.
Tena tsara ny manapaka sy manampy a kaserôla fisakafoanana maraina , topping ovy nopotsehina na koa alahady maraina fihinanana bacon sy atody.
Bacon ao amin'ny lafaoro
Tena tiako ny bacon fa ny zavatra tsy tiako foana momba ny bacon dia ny loza mety hitranga rehefa manendy. Nandeha ny andro nijanonako teo ambonin'ny lapoaly nandrendrehana bacon raha mbola niparitaka tamin'ny diloilo ny fatako.
From Bacon nofonosin'ny felam-kisoa ny Akoho fonosina Bacon , bacon mahandro tsara amin'ny lafaoro (na manandrama bacon amin'ny fryer amin'ny rivotra !)
Ahoana no fahandroanao Bacon ao amin'ny lafaoro
Tsotra izany! Atombohy amin'ny fametrahana ny bacon amin'ny lovia fanosotra (alaharo foil raha tianao). Na dia misy soso-kevitra momba ny bacon nendasina ao anaty lafaoro aza milaza sosona iray, hitako fa ny famelana ny bacon hipetraka amin'ny rano mitete azy dia manampy azy ho tsara kokoa (fa tsy ho maina).
Apetaho amin'ny lovia fanaova fanafoanana ny bacon. Raha te hitahiry toerana eo amin'ny lapoaly ianao dia atsofohy isaky ny tapa-damba, ka ny lafiny lehibe kokoa dia mifanohitra amin'ny teo aloha.
Mofomamy ny bacon 18 minitra na mandra-pahatongan'ny bacon amin'ny haavon'ny crispiness tadiavina (tsy mila mamily azy).
Esory ny bacon avy amin'ny lapoaly ary apetaho amin'ny lamba famaohana taratasy mba hanosotra menaka.
Ny tavy bacon amin'ny lapoaly dia azo tehirizina ary manampy betsaka Voanjo voatavo namboarina , akanjo salady, Salady Pasta BLT na ho fanendasana atody!
Fomba fahandroana Turkey Bacon ao amin'ny lafaoro
TIA tia bacon, mifalia! Ny bacon any Torkia dia handrahoana sakafo mitovy amin'ny bacon mahazatra ao anaty lafaoro, saingy mila fotoana kely kokoa (11-13 minitra eo ho eo). Torkia bacon dia manolo toerana betsaka amin'ny ankamaroan'ny fomba fahandro!
Resiko Bacon ankafiziko
Bundes Green Green Bean - Mandrosoa!
Famonoana henan-Bacon mafana
Baomba Cheeseburger Bacon - Tsara ho an'ny sakafo atoandro!
Smokies mifono siramamy mena
Dill pickle Bacon fromazy voatono - Recipe ankafizinao!
Atody devoly devoly Bacon
5Fromiraika ambin'ny folovato FAMERENANAResipeo
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo18 minitra Fotoana manontolo2. 3 minitra Fanompoana8 servings MpanoratraHolly Nilsson Ity misy fomba fahandro bacon ao anaty lafaoro ka mivoaka madiodio tanteraka isaky ny mandeha. pirinty Pin
▢1 fonosana Bacon
Alamino amin'ny lovia fanaova-jaza ny bacon.
Mofomamy mandritra ny 18-20 minitra na mandra-pahatongan'ny bacon.
Alefaso amin'ny takelaka nilahatra lamba famaohana taratasy.
Kaloria:230,Proteinina:6h,Tavy:iraika amby roapoloh,Tavy mahavoky:7h,Cholesterol:36levitra,Sodium:365levitra,Potasioma:109levitra,Vitamina A:roa-polo ambyIU,Kalsioma:3levitra,Vy:0.2levitra
Teny lakilenamboarina bacon, ny fomba fahandro Bacon ao anaty lafaoro, laonono nandrahoina amin'ny lafaoro Mazava ho azysakafo maraina masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .